05/02/2018 - Page 2 sur 4 -
Fanisana ny mponina : Olona 25 000 mahery aparitaka manerana ny Nosy
Olona 32 no vita fiofanana hiatrika ny fanisana faobe. Olona 25 000 kosa indray no horaisina hanao ny fanisana aparitaka manerana ny Nosy, ny volana aprily ho avy izao. Ampirisihana ihany koa ny fandraisana anjaran’ireo …Tohiny
Ivoloina- Anjahamarina : Hanomboka amin’ny 16 febroary ny fanamboaran-dalana
Mampikaikaika ny mpampiasa lalana tokoa ny faharatsian-dalana eo Ivoloina sy Anjahamarina amin’iny lalam-pirenena faha-5 iny. Horaisin’ny orinasa tsy miankina iray antsoina hoe Capricor Entreprise ny lany mahakasika azy io, araka ny fanazavana. “Ny faha- 16 …Tohiny
Fianarantsoa : Wanted i Jao Marinjara Stephan
Taorian’ny fanadihadiana lalina sy ny fikarohana nataon’ny polisy any Isanda Fianarantsoa, izay tsy mbola nahitam-bokany hatramin’izao, dia fantatra fa efa namoahana didy fampikarohana i Jao Marinjara Stephan, voaporofo ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ilay rangahy tratra …Tohiny
Ambodivona : Tra-tehaka ny mpanakalo vola Euros sandoka
Lehilahy iray 45 taona antsoina hoe Jonah no noraisim-potsiny teny Ambodivona, ny tolakandron’ny alakamisy lasa teo raha nikasa hanakalo vola vahiny sandoka. Tra-tehaky ny polisy niaraka taminy, tamin’io fotoana io ihany koa ny vola 500 …Tohiny
Tsy maty voalavo an-kibo. Izay no azo hamehezana ny vaovao navoakan’ny gazety mpiseho isan’andro, ny talata 12 desambra teo, mahakasika ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina. Raha atao bango tokana ny voalazan’ilay lahatsoratra navoakan’ity gazety mpiseho ...Tohiny
Fifiadianana : Mitarika lavitra Ravalomanana